Nomen’ny mpiserasera Hong Kong anarana hoe “Dunkerque ao Hong Kong” ny fivoahan’ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin’ny seranam-piaramanidina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Septambra 2019 6:38 GMT
Mpanao fihetsiketsehana an-jatony no niala ny seranam-piaramanidina. Sary avy amin'ny Stand News. Nahazoana alàlana.
Mpanao fihetsiketsehana an'arivony no nandeha fitateram-bahoaka ho any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tao an-tanàna tamin'ny 1 septambra mba hiezaka hampikatso ny seranam-piaramanidina. Na izany aza, nahatonga azy ireo nihitsoka tao amin'ny Nosy seranam-piaramanidina 35 kilometatra miala ny tanàna ny hetsika fanelingelenana nataon'izy ireo.
Rehefa nanomboka nanao fisamborana ny polisy, dia nanapa-kevitra ny hiverin-dalana handeha an-tongotra any amin'ny lalambe ireo mpanao fihetsiketsehana ary tonga namonjy azy ireo ireo fiaran'olon-tsotra an-jatony. Nisy ireo mpiserasera sasany niantso ny zava-nitranga hoe “Fivoahana an'i Dunkerque ao Hong Kong.
@hker nandefa sary mampiseho ny filaharana lava be misy ireo fiara pick up tao amin'ny lalamben'ny seranam-piaramanidina:
Fivoahana Dunkerque ao Hong kong
Mpamily manolo-tena haka mpanao fihetsiketsehana tafahitsoka tao amin'ny lalambe ireo mivoaka alina satria nakaton'ny fanjakana ny fitateram-bahoaka rehetra mampitohy ny seranam-piaramanidina sy ny tanàna
Manondro ny famoahana ireo miaramila Frantsay, Britanika, Belza sy Holandey izay tafahitsoka tao amoron-dranomasin'i Dunkerque, Frantsa nandritra ny Ady Lehibe Faharoa ny Fivoahana Dunkerque.
01 Septambra Nampitahaina tamin'ny Sambo Kelin'ny Dunkerque (sambon'olon-tsotra 850 nanavotra miaramila maherin'ny 336.000) ny Diabe tao amin'ny Seranam-piaramanidina.
Mpanao fihetsiketsehana an-jatony no nandeha an-tongotra tao amin'ny lalambe Lantau avy any amin'ny seranam-piaramanidina. Olom-pirenena malala -tanana marobe no nandeha fiara mba hitondra azy ireo hody any an-trano.
Nanjary hetsika fanakorontanana manohitra ny fanjakana ny fanentanana manohitra ny fampodiana-fandroahana satria manohy mandà tsy hanafoana manontolo ny volavolan-dalàna sy ny fanadihadiana tsy miankina momba ny herisetra ataon'ny polisy ny governemanta. Nateraky ny fifandonana mahery vaika teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy misahana ny rotaka ny hetsika farany tao amin'ny seranam-piaramanidina rehefa tsy nahazo alàlana ny fihetsiketsehana tamin'ny 31 aogositra.
Talohan'izay, nanao sit-in milamina nandritra ny 5 andro tao amin'ny efitra fahatongavana ireo mpanao fihetsiketsehana mandra-pahatongan'ny 13 Aogositra rehefa namoaka didy momba ny fihetsiketsehana ny Fitsarana Avo. Satria tsy tafiditra tao amin'ny didy ireo faritra ivelan'ny seranam-piaramanidina, dia niezaka nanakana ny fifamoivoizana sy nanelingelina ny seranam-piaramanidina ireo mpanao fihetsiketsehana.
Tamin'ny 1 septambra teo, mpanao fihetsiketsehana an-jatony no tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina tokony ho tamin'ny 1 ora tolakandro ary nivory tao amin'ny fara-fiantsonan'ny fiara-fitateram-bahoaka. Nanao hetsika ireo hiringiriny mba hanakana ny fidirana ao amin'ny seranam-piaramanidina tamin'ny sakan-dalana.
Nisy ireo mpanao fihetsiketsehana niezaka nanakana ny fidirana ao amin'ny seranam-piaramanidina. Sary avy amin'ny Stand News. Nahazoana alàlana.
Vetivety dia tonga ny mpitandro ny filaminana ary naato ny tolotra fitateram-bahoaka. Nampiato ny tolotra fiaran-dalamby avy ao amin'ny nosy Hong Kong mankany amin'ny seranam-piaramanidina ihany koa ny orinasa Metro mba hanakanana ireo mpanao fihetsiketsehana hafa tsy ho tonga eny amin'ny seranam-piaramanidina.
Araka ny fandaharana antsipirihany momba ny fihetsik'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny hetsiky ny polisy avy amin'ny Stand News, tokony ho tamin'ny 4 ora hariva no naparitaka ny polisy misahana ny rotaka mba hanomboka hanao fisamborana. Raha handositra, nanapa-kevitra ny handeha tongotra 5 kilometatra mankany Tung Chung, distrika ambanivohitra eo akaiky misy lalana ambanin'ny tany sy fiara fitateram-bahoaka ireo mpanao fihetsiketsehana. Nametraka barazy teny an-dàlana ny sasany mba hanakanana ireo polisy tsy hanenjika azy ireo. Nanipy zavatra sy bara vy tamin'ny lalamby ambanin'ny tany ihany koa ny sasany tamin'izy ireo, ary naaton'ny orinasa Metro tsy hiala ao amin'ny seranam-piaramanidina hihazo ny afovoan-tanàna ny fiaran-dalamby.
Mpanao fihetsiketsehana an'arivony nandeha nankany Tung Chung niala tao amin'ny seranam-piaramanidina. Sary avy amin'ny Stand News. Nahazoana alàlana.
Satria tsy niasa intsony ny fitateram-bahoaka rehetra tao amin'ny seranam-piaramanidina, tsy maintsy nandeha an-tongotra antsasakadiny nankany Tung Chung ireo olom-pirenena, mpizahatany sy mpiasan'ny seranam-piaramanidina. Na izany aza, rehefa tonga izy ireo dia naaton'ny orinasa Metro ny tolotra lalamby ambanin'ny tany Tung Chung. Nopotehin'ireo mpanao fihetsiketsehana tezitra ny tobin'ny orinasa avy eo.
Raha tsy misy metro, dia vitsy ny safidy hafa hialàna ao Tung Chung – na haka sambo mankany Tuen Mun na fiara fitateram-bahoaka mankany Mui Wo izay misy sambo mankany Afovoan-tanàna. Na izany aza, mety mampidi-doza ireo safidy ireo satria miandry azy ireo eny amin'ny seranana ny polisy misahana ny rotaka. Nanapa-kevitra ny handeha an-tongotra 12,6 km mankany amin'ny gara Yan O na 23,6 kilometatra mankany amin'ny Lantau Toll Plaza, izay mbola misy fiara fitateram-bahoaka miasa ireo mpanao fihetsiketsehana an-jatony.
Mba hanakanana ny fiaran'ny polisy tsy hanaraka ireo mpanao fihetsiketsehana, dia fiaran'olon-tsotra vitsivitsy no nandeha moramora mba hanakanana ny arabe sy hampikatso ny fifamoivoizana raha naka ireo mpanao fihetsiketsehana teny an-dalana kosa ny hafa.
Mpanao fihetsiketsehana an-jatony mandeha an-tongotra avy any Tung Chung mankany amin'ny Lantau Toll Plaza na Yan O. Sary avy amin'ny Stand News. Nahazoana alàlana.
Manodidina ny iray ampahatelon'ny mpanao fihetsiketsehana no niditra tamin'ny fiaran'olon-tsotra teny amin'ny làlambe. Ny hafa kosa nanohy ny diany mankany Yan O sy Lantau Toll Plaza, ary naka azy ireo teny an-dalana ireo fiaran'olon-tsotra.
Fiara an-jatony no niara-nisalahy tamin'ny hetsika famonjena ary narindra tamin'ny alalan'ny vondrona Telegram ny ankamaroany.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny fihetsiketsehana manohitra ny fampodiana ao Hong Kong, dia tsidiho ny pejy fitantarana manokana ataon'ny Global Voices.